Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Dakhliga hoteelada Hawaii ayaa si aad ah u kordhay Juun 2021
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Waa calaamad wanaagsan in la arko hudheelada Hawaii ee hoteelada gobolka oo dhan oo ka warbixinaya kor u kac, iyadoo la ogyahay inta shaqaale maxalli ah iyo qoysasku ka faa'iideysanayaan soo noqoshada suuqa gudaha.
Dakhliga hoteelka Hoteelka dakhliyada gobolka oo dhan waxay u kaceen $ 387.7 milyan bishii Juun.
Hoteellada Maui County waxay hoggaaminayeen gobollada bishii Juun.
Qeybtii hore ee 2021, waxqabadka huteel Hawaii ee gobolka oo dhan wuxuu sii waday inuu saameyn ku yeesho CUDURKA-19 faafa.
Hawaii hudheelada ayaa ku soo warramey dakhli aad u sarreeya oo ka sarreeya qol kasta oo la heli karo (RevPAR), celceliska celceliska maalinlaha (ADR), iyo degitaanka bisha Juun 2021 marka la barbar dhigo Juun 2020 xilligaas oo amarka karantiil ee Gobolka ee loogu talagalay dadka safarka ah musiibada COVID-19 awgeed ay u keentay hoos u dhac weyn. warshadaha hoteelka. Markii la barbardhigo Juun 2019, gobolka oo dhan RevPAR iyo ADR way ka sarreeyeen Juun 2021 laakiin deggenaashaha ayaa ka hooseeyay.
Sida laga soo xigtay Warbixinta Waxqabadka Hotel Hawaii ee ay daabacday Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA), RevPAR-ka gobolka oo dhan bishii Juun 2021 wuxuu ahaa $ 247 (+ 769.5%), oo leh ADR $ 320 (+ 127.0%) iyo deganaanshaha 77.0 boqolkiiba (+56.9 boqolkiiba dhibco). Marka loo barbardhigo Juun 2019, RevPAR wuxuu 4.8 boqolkiiba ka sarreeyaa heerarka 2019, oo ay keeneen sare ADR (+ 14.2%) oo hoos u dhiga degitaanka hoose (-6.9 boqolkiiba dhibcaha)
John De Fries, madaxweynaha HTA iyo agaasimaheeda ayaa yidhi "waa calaamad wanaagsan in la arko hudheellada hudheellada laga soo tebinayo ee gobolka oo dhan ka sheegaya kor u kac, iyadoo la ogyahay inta shaqaale maxalli ah iyo qoysasku ka faa'iideysanayaan soo noqoshada suuqa gudaha.
Lixdii bilood ee ugu horreysay, inkasta oo hudheelka RevPAR iyo deggenaashaha aan wali u dhawayn heerarka cudurrada faafa ee sannadka 2019, waa dhiirrigelin in la arko soo noqoshada joogtada ah ee shaqooyinka iyo fursadaha kamaaina oo aan halkaas joogin sannad ka hor.
Natiijooyinka warbixintu waxay adeegsadeen xog ay soo ururiyeen STR, Inc., oo fulisa sahankii ugu ballaadhnaa uguna ballaadhnaa ee ku saabsan guryaha hudheellada ku yaal Jasiiradaha Hawaii. Bishii Juun, sahanku wuxuu ka koobnaa 138 guri oo matalaya 44,614 qol, ama 82.6 boqolkiiba dhammaan guryaha hoyga ¹ iyo 85.2 boqolkiiba guryaha hoyga leh oo leh 20 qol ama ka badan oo ku yaal Jasiiradaha Hawaiian, oo ay ku jiraan adeeg buuxa, adeeg xaddidan, iyo hoteelada guryaha is-kaashatada. Guryaha la kireysto ee fasaxa iyo waqtiga gogosha laguma darin sahankan.
Inta lagu jiro Juun 2021, inta badan rakaabka ka imanaya gobolka dibaddiisa iyo safarka ismaamul goboleedyadu way dhaafi karaan 10-maalmood oo is-karantiil ah oo Gobolka qasab ah oo leh natiijo aan fiicnayn oo COVID-19 NAAT ah oo ka timid Iskaashatada Imtixaanka La Aaminey ka hor intaanay u amba bixin Hawaii iyada oo loo marayo barnaamijka Safarka Safarka ah. Intaa waxaa dheer, shakhsiyaadka si buuxda loo tallaalay Hawaii way dhaafi kartaa amarka karantiil ee bilaabmaya 15-ka Juunyo xayiraadaha safarka ee gobolada-dhexe ayaa sidoo kale laga qaaday sidoo kale 15-kii Juun.
Dakhliga hoteelka Hoteel dakhliga guud ahaan gobolka wuxuu u kacay $ 387.7 milyan (+ 1,607.1% vs. 2020, + 1.5% vs. 2019) bishii Juun. Baahida qolku waxay ahayd 1.2 milyan oo habeen oo qol ah (+ 652.0% vs, 2020, -11.1% vs. 2019) iyo bixinta qolku waxay ahayd 1.6 milyan habeen oo qol ah (+ 96.3% vs. 2020, -3.2% vs. 2019). Hanti badan ayaa xirtay ama yareysey howlahoodii laga bilaabo Abriil 2020. Sababtoo ah dhimista saadka, xogta isbarbardhiga ee suuqyada qaarkood iyo fasallada qiimaha lama helin 2020; isbarbardhigga 2019 ayaa lagu daray.